Fanolorana ireo fiara vaovao - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
24 octobre 2011 admin 4x4, apokalypsy, fiara
Niavaka kely ny fotoam-bavaka izay niarahana tamin’ny Fiangonana Apokalypsy tetsy amin’ny foibe Ambohimarina Itaosy. Ankoatry ny fivoriam-bavaka toy ny isan-tsabata, dia nisy ihany koa ny fanolorana ireo fitaovan’ny fiangonana vaovao, izay marihina fa niarahana tamin’ny pasitera Mailhol.
«Isaky ny vita ny fifadian-kanina 40 sabata, dia misy hatrany ny fanomezana omen’i Jehovah ho an’ny fiangonana…» Ireo no nisongadina tamin’ny voalazan’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol, ny sabata 22 oktobra 2011 lasa teo, tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy. Ny finoana kosa no nivoitra tao anatin’ny fampaherezana izay noentiny. Araky ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny Hebreo 11:1, dia “fanantenana ny zavatra tsy hita no atao hoe finoana”. Tao aorian’ny toriteny kosa dia niroso tamin’ny fanolorana ireo fiara vaovao ny mpanompon’Andriamanitra dia : Mini-bus Ford Transit ary Car mitondra ny marika Hyger kosa ny faharoa. Nandritra ny sabata hariva kosa no notanterahina ny fanolorana loka ho an’ireo ankizy mendrika nandritra ny taom-pianarana sekoly Sabata 2011.
Mbola ny pasitera Mailhol hatrany no nitondra ny fampaherezana tamin’ny fotoana tapany hariva. Raha sitrapon’Andriamanitra dia hanao rodobe ho any Antsohihy indray ny fiangonana ny sabata faha 29 oktobra ho avy izao, hamarana ny fampianarana Apokalypsy izay notontosaina tany an-toerana.
← Batisa Tao Mahanoro
Fiangonana Apokalypsy Ambohimarina →